Olee otu Rogue, Hacked Subdomain nwetara ngalaba m nke isi na nsogbu na Google! | Martech Zone
Olee otu A Rogue, Hacked Subdomain nwetara My Primary ngalaba Nsogbu na Google!
Fraịdee, Nọvemba 30, 2018 Monday, June 17, 2019 Douglas Karr
Mgbe ọrụ ọhụrụ kụrụ n’ahịa m chọrọ ịnwale, ana m edebanye aha ma nye ya nnwale ule. Maka ọtụtụ nyiwe, akụkụ nke onboarding bụ igosi subdomain na sava ha ka ị nwee ike ịgba ọsọ n'elu ikpo okwu na subdomain gị. Kemgbe ọtụtụ afọ, agbakwunyela m ọtụtụ subdomains ndị rụtụrụ aka na ọrụ dị iche iche. Ọ bụrụ na m kwụsịrị ọrụ ahụ, anaghị m echekarị nhichapụ CNAME na ntọala DNS m.
Ruo n'abalị a!
Mgbe m nyochachara email m n'abalị a, enwetara m ozi na-atụ m ụjọ. Ọ bụ ịdọ aka ná ntị sitere na Google Search Console na-abanyela na saịtị m ma achọrọ m ịrịọ nyochagharị iji hụ na saịtị m nọrọ na nsonaazụ ọchụchọ. Ana m akwado ụlọ ọrụ m niile na akaụntụ nnabata Bochum, yabụ ikwu na m nwere nchegbu bụ nkwupụta okwu. Anọ m na-apụ apụ.
Nke a bụ email m natara:
Jiri nlezianya leba anya na URL ndị Google Search Console depụtara, n'agbanyeghị, ị ga-ahụ na ọ nweghị onye n'ime ha nọ na ngalaba m. Ha nọ na subdomain a na-akpọ di. Nke a bụ otu subdomains ule m jirila ọtụtụ ọrụ dị iche iche.
Ndi Ebe nrụọrụ m waara?
Mba. Ngalaba subdomain na-atụ aka na saịtị ndị ọzọ na anaghị m enwekwa ike ịchịkwa ọzọ. Ọ pụtara mgbe m mechiri akaụntụ ahụ; ọ dịghị mgbe ha wepụrụ ha na ngalaba ntinye. Nke ahụ pụtara na subdomain m ka nọ na-arụ ọrụ ma na-atụ aka na saịtị ha. Mgbe etinyere saịtị ha, o mere ka ọ dị ka ọ bụ na hacking. Ọbụna ihe ịtụnanya bụ na Google Search Console achọghị ịma na ọ bụ ụfọdụ subdomain na-adịghị mma, ha ka dị njikere ịdọrọ saịtị m dị ọcha, site na nsonaazụ ọchụchọ!
Chei! Echeghị m na ha ga-anọ n'ihe ize ndụ.
Kedu ka m siri mezie ya?
Agara m Ntọala DNS ma wepu CNAME ma ọ bụ ndekọ ọ bụla a na-anaghị eji eme ihe nke rụtụrụ aka na ọrụ ọbụla m na-ejighi. Gụnyere di, n'ezie.
Echere m ruo mgbe m DNS ntọala propagated gburugburu weebụ iji hụ na di subdomain edozighi n'ebe ọ bụla ọzọ.
Emere m a nyochaa backlink eji Semrush iji hụ na ndị na-agba ọsọ anaghị anwa ịbawanye ikike nke subdomain. Ha nwere n't ma ọ bụrụ na ha nwere, M gaara disavowed ọ bụla nke ngalaba ma ọ bụ njikọ site na Google Search njikwa.
Edebere m a nyochaghachi echiche ozugbo site na Google Search Console.
Enwere m olile anya na ọ gaghị ete aka ma nchọta m achọpụtaghị.
Olee Otú I Nwere Ike Isi Zere Nke A?
Aga m akwado ka ị nyochaa ntọala DNS gị ọbụlagodi otu ugboro n'ọnwa iji hụ na ị na-ewepu subdomains ọ bụla ị na-ejighi. Ana m agabiga ngalaba m ugbu a. M ga-akwado gị ka ị zụta ngalaba dị iche iche maka ọrụ ndị ọzọ kama itinye isi gị, ngalaba ndị dị n'ihe egwu. Wayzọ a, ma ọ bụrụ na a subdomain ego n'anya hacked ọ gaghị emetụta gị isi na ngalaba si ikike ikike na visibiliti.
Tags: ihe ndekọkpọọmebie ọdịnayadnsdomaingoogle search njikwahackedhacked ọdịnayanyochaghachi echichesubdomain
Nzuzo Nzuzo maka 2019: Asymmetry, Jarring Colours, and Exaggerated Proor